အပျိုဖော်ဝင်ခါစ (၁၆) နှစ်သမီးလေး အခန်းထဲကို အဖေတစ်ယောက် ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ – Amara News
အပျိုဖော် ဝင်ခါစ ၁၆ နှစ်သမီးလေး အခန်းထဲကို အဖေတစ်ယောက် ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ သမီးမရှိပဲအခန်းက သပ်ရပ်နေပြီး စားပွဲပေါ်မှာ စာတစ်စောင် တင်ထားတာ တွေ့လိုက်ပါတယ်။
စာကို ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ ချစ်သောဖေဖေ ဒီစာကို ရေးရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး ။ဖေဖေနဲ့ မေမေကို တကယ်ချစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သမီးရဲ့ ချစ်သူနောက်ကို အပြီး လိုက်သွားပါပြီ။
စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ဖေဖေ သူကသမီးအပေါ် ကောင်းပါတယ်။အပြင်ပန်းက တက်တူးတွေ၊ ဆေးမင်ကြောင်တွေဘယ်လောက်ပဲများများ သူသမီးကို တကယ်ချစ်တာ ခံစားမိပါတယ်။
သမီးထက် ၁၄ နှစ် ပိုကြီးတယ်လေ။ အိမ်ထောင်ကွဲပေါ့။ သို့ပေမယ့် သူ့ဇာတ်လမ်းတွေ ပျက်သွားပြီလို့ ကတိပေး ထားတယ်။သူကတိဖျက်တာ ၁၅ ခါ မကပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ နောက်ဆုံး ဖြစ်မယ်လို့သမီး ယုံကြည်တယ်လေ။
သမီးမှာလည်း ကိုယ်ဝန် ရှိနေပြီလေ။ ငယ်သေးပေမယ့် ဒီအရွယ်မှာ မွေးလို့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ကလေးတွေ အများကြီးမွေးပြီး ဘဝတည်ဆောက်ဖို့လည်း သမီးဆန္ဒရှိတယ်။
သူလည်း ဒီတိုင်းပဲလေ။ ဒီအတွက် ဖေဖေ စိတ်မပူပါနဲ့။ သူ့မှာ အလုပ်အကိုင် မရှိဘူးဆိုတာမှန်ပါတယ်။သို့ပေမယ့် မြို့မှာ သူဆေး၆ ဖြန့်တော့မယ်လေ။ သမီးကို ချစ်ရင် ဘယ်သူမှ မသိစေနဲ့နော်။ သမီးတို့ ချမ်းသာတဲ့ တစ်နေ့ကျ ဖေဖေတို့ကို ပြန်ကျေးဇူး ဆပ်မှာပါ။
ဖေဖေ့ကိုလည်း ချစ်တယ်။ ချစ်သူကိုလည်း ချစ်တယ်။ ဒီတော့ သမီး ပိုချစ်ရတဲ့ ချစ်သူဆီကိုပဲ လိုက်သွားပါပြီ အဖေ။ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့်အဖေ့ရဲ့ သမီး စာဖတ်ပြီးချိန် ဒေါသကြီးလှတဲ့ အဖေဖြစ်သူဟာ လက်တွေတောင် ကတုန် ကရင် ဖြစ်လာပါတယ်။
စာကို ဆုပ်ဖြဲမယ်အလုပ် အောက်နားမှာ စာနည်းနည်း ထပ်ရေးထားတာ တွေ့တော့ ဆက်ဖတ်မိပါတယ် PS: ဖေဖေရေ။ အပေါ်က ရေးထားသမျှ တစ်ခုမှ မမှန်ပါဘူးနော်။အခု သမီးဘေးက သူငယ်ချင်း အိမ်မှာ လောကမှာ ထင်ထားတာတွေ (သမီး ရီပို့ကဒ်) ထက် အရမ်းဆိုးရွားတဲ့ အရာတွေ ရှိသေးတယ် ….
ဖြစ်နိုင်သေးတာကို သမီး ပြောပြချင်တာပါ…..လောလောဆယ် စားပွဲ အံဆွဲထဲမှာ ကျောင်းကပေးတဲ့ ရီပို့ကဒ် ( Report card ) ထားထားတယ် ဖေဖေ။အမှတ်နဲ့ အဆင့်ကို မကြည့်ပဲ လက်မှတ် ထိုးပေးနော်။ သမီးကို ချစ်လို့ စိတ်ဆိုးပြေရင် ဖုန်းဆက် ခေါ်လိုက်နော်….။
အပြိုဖျောဝငျခါစ (၁၆) နှဈသမီးလေး အခနျးထဲကို အဖတေဈယောကျ ဝငျကွညျ့လိုကျတဲ့ အခါ
အပြိုဖျော ဝငျခါစ ၁၆ နှဈသမီးလေး အခနျးထဲကို အဖတေဈယောကျ ဝငျကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ သမီးမရှိပဲအခနျးက သပျရပျနပွေီး စားပှဲပျေါမှာ စာတဈစောငျ တငျထားတာ တှလေို့ကျပါတယျ။
စာကို ဖတျကွညျ့တဲ့အခါ ခဈြသောဖဖေေ ဒီစာကို ရေးရတဲ့အတှကျ စိတျမကောငျးပါဘူး ။ဖဖေနေဲ့ မမေကေို တကယျခဈြပါတယျ။ သို့ပမေယျ့ သမီးရဲ့ ခဈြသူနောကျကို အပွီး လိုကျသှားပါပွီ။
စိတျမဆိုးပါနဲ့ ဖဖေေ သူကသမီးအပျေါ ကောငျးပါတယျ။အပွငျပနျးက တကျတူးတှေ၊ ဆေးမငျကွောငျတှဘေယျလောကျပဲမြားမြား သူသမီးကို တကယျခဈြတာ ခံစားမိပါတယျ။
သမီးထကျ ၁၄ နှဈ ပိုကွီးတယျလေ။ အိမျထောငျကှဲပေါ့။ သို့ပမေယျ့ သူ့ဇာတျလမျးတှေ ပကျြသှားပွီလို့ ကတိပေး ထားတယျ။သူကတိဖကျြတာ ၁၅ ခါ မကပမေယျ့ ဒီတဈခါတော့ နောကျဆုံး ဖွဈမယျလို့သမီး ယုံကွညျတယျလေ။
သမီးမှာလညျး ကိုယျဝနျ ရှိနပွေီလေ။ ငယျသေးပမေယျ့ ဒီအရှယျမှာ မှေးလို့ ဘာမှမဖွဈပါဘူး။ ကလေးတှေ အမြားကွီးမှေးပွီး ဘဝတညျဆောကျဖို့လညျး သမီးဆန်ဒရှိတယျ။
သူလညျး ဒီတိုငျးပဲလေ။ ဒီအတှကျ ဖဖေေ စိတျမပူပါနဲ့။ သူ့မှာ အလုပျအကိုငျ မရှိဘူးဆိုတာမှနျပါတယျ။သို့ပမေယျ့ မွို့မှာ သူဆေး၆ ဖွနျ့တော့မယျလေ။ သမီးကို ခဈြရငျ ဘယျသူမှ မသိစနေဲ့နျော။ သမီးတို့ ခမျြးသာတဲ့ တဈနကြေ့ ဖဖေတေို့ကို ပွနျကြေးဇူး ဆပျမှာပါ။
ဖဖေကေို့လညျး ခဈြတယျ။ ခဈြသူကိုလညျး ခဈြတယျ။ ဒီတော့ သမီး ပိုခဈြရတဲ့ ခဈြသူဆီကိုပဲ လိုကျသှားပါပွီ အဖေ။ခဈြခွငျးမြားစှာဖွငျ့အဖရေဲ့ သမီး စာဖတျပွီးခြိနျ ဒေါသကွီးလှတဲ့ အဖဖွေဈသူဟာ လကျတှတေောငျ ကတုနျ ကရငျ ဖွဈလာပါတယျ။
စာကို ဆုပျဖွဲမယျအလုပျ အောကျနားမှာ စာနညျးနညျး ထပျရေးထားတာ တှတေ့ော့ ဆကျဖတျမိပါတယျ PS: ဖဖေရေေ။ အပျေါက ရေးထားသမြှ တဈခုမှ မမှနျပါဘူးနျော။အခု သမီးဘေးက သူငယျခငျြး အိမျမှာ လောကမှာ ထငျထားတာတှေ (သမီး ရီပို့ကဒျ) ထကျ အရမျးဆိုးရှားတဲ့ အရာတှေ ရှိသေးတယျ ….
ဖွဈနိုငျသေးတာကို သမီး ပွောပွခငျြတာပါ…..လောလောဆယျ စားပှဲ အံဆှဲထဲမှာ ကြောငျးကပေးတဲ့ ရီပို့ကဒျ ( Report card ) ထားထားတယျ ဖဖေေ။အမှတျနဲ့ အဆငျ့ကို မကွညျ့ပဲ လကျမှတျ ထိုးပေးနျော။ သမီးကို ခဈြလို့ စိတျဆိုးပွရေငျ ဖုနျးဆကျ ချေါလိုကျနျော….။
I love you Daddy ခရကျဒဈ ရယျမောပြျောရှငျနိုငျကွပါစေ….။
Previous Article စညျးမညျြးတှေ ထုတျပွီး ကွပျမတျဖို့ ခေါငျးရှောငျနကွေတဲ့ သူတှနေဲ့ နယျတှပေါ ကူးစကျမှု မွငျ့လာတဲ့ အဖွဈ
Next Article အိမ်ထောင်ရှိပါတယ် အခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ရူးရူးမူးမူး ချစ်မိနေတယ် ဖတ်ကြည့်ပါ